चीन ozoz वूजी तातो चटनी खाली गिलासको बोतल क्याप र ड्रिपरको साथ सिन्डि band ब्यान्ड निर्माण र कारखाना | Easyypack
5oz वूजी तातो चटनी खाली गिलासको बोतल क्याप र ड्रिपर र सink्करित ब्यान्डको साथ
यी खाली गिलास तातो चटनीको बोतलहरू तपाईको घरेलु क्यालोरीहरूको लागि आदर्श कन्टेनर हुन्! ड्यासबोर्ड शीर्षको साथ, तिनीहरू भण्डारन गर्न र तातो सॉस प्रदान गर्न उत्तम छन्। बोतल स्पष्ट गिलास बाट बनेको छ र कालो / रातो स्क्रू क्याप छ। एक साधारण बोतल घर र व्यावसायिक प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ, र यसले क्याटरि and र रेस्टुरेन्ट उद्योगहरूमा ग्राहकहरूको लागि मौसम र मौसम लगाउँदछ।
5oz वूजी तातो चटनी खाली गिलासको बोतल क्याप र सिको ब्यान्डको साथ
O ओज स्पष्ट गिलास सॉस बोतल र रिड्यूसर क्याप एक खाना-सुरक्षित कन्टेनर हो जुन दुबै सुन्दर र व्यावहारिक छ। बोतलको अग्लो र साँघुरो प्रोफाइलको मतलब सामग्रीलाई ह्यान्डल गर्न र वितरण गर्न सजिलो हुन्छ। उही समयमा, पारदर्शी गिलासले तपाइँका ग्राहकहरूलाई उनीहरूले खरीद गर्न चाहेको उत्पादनहरू हेर्न अनुमति दिन्छ, जुन ग्राहकहरूको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्नका लागि अत्यन्त उपयोगी छ! थप रूपमा, चिल्लो सतह लेबल थप्न सजिलो बनाउँदछ। सामग्रीको वितरण नियन्त्रण गर्न बोतलमा एक रेड्यूसर घुसाइएको छ।
हाम्रो गिलास बोतलहरू तेल, सिरका, सॉस र मसालाको लागि उत्तम कन्टेनर हुन्। केवल बोतलको फराकिलो शरीरमा लेबल थप्नुहोस् तपाईंको ग्राहकहरूलाई घटक र एलर्जी जानकारी प्रदान गर्न। यदि तपाईं व्यावसायिक रूपमा उत्पादन बेच्न चाहानुहुन्छ भने, यो बोतल भान्छा, रेस्टुरेन्ट, कफि पसल, सुपरमार्केट र डेलिकेटेसन स्टोरहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Easyypack ग्लासवेयरले सबै ग्राहकहरूलाई नि: शुल्क नमूनाहरू अर्डर गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंलाई वास्तवमै थोकमा हाम्रो प्याकेजिंग आवश्यक छ भने, हामी तपाईंलाई चेकआउट चरणमा स्वचालित रूपमा ठूलो छुट प्रदान गर्नेछौं। हामी सिफारिस गर्दछौं कि सबै ग्राहकहरु एक आदेश राख्नु अघि उत्पादन परीक्षण गर्नुहोस्। यसले हाम्रो गिलासवेयरले ठूलो लगानी गर्नु अघि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। यदि तपाईंसँग हाम्रा उत्पादनहरू बारे कुनै निश्चित प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सित्तैमा सम्पर्क गर्नुहोस्!
3oz / 8oz क्षमता पनि उपलब्ध छ
MOQ १००० एकाई हो
छूट थोक खरीदहरूमा लागू
उच्च गुणवत्ताको सोडा चूना गिलास सामग्रीको बनेको
अघिल्लो: चीनमा कस्टम गिलास परफ्यूम बोतल सम्पूर्ण सेट आपूर्तिकर्ता
अर्को: Oz२२०००००० मिलीग्राम गिलास मेसन भण्डारण क्यानिंग जार चाँदीको पेंच धातु ढक्कनको साथ
गिलास पेय बोतल
ग्लास पेय बोतल र जार
ग्लास पेय बोतलहरूको थोक
ग्लास जुस बोतलहरू
ग्लास जुस बोतल थोक
गिलास सोडा बोतल
8oz 250 मिलीलीटर सीधा तरफा गिलास जार डब्ल्यू संग जार ...
32oz 1000 मिलीलीटर ग्लास मेसन भण्डारण क्यानिंग जार विट ...
कोलोको साथ १oz२०० मिलिमिटर चौडा मुख गिलास मेसन जार ...
२ ओज ml० मिलि रातो खोर्सानी मिर्च तातो सॉस गिलासको बोतल ...
२oz २77 mlml० एमएल सिलिन्डर राउन्ड ग्लास जार संरक्षण गर्दै ...
1.5oz 45 मिनी हेक्सागोनल स्पष्ट ग्लास जार एच को लागि ...
ग्लास पम्प बोतलहरू खाली गर्नुहोस्, पम्पको साथ ग्लास लोशन बोतलहरू, गिलास पम्प बोतलहरु आवश्यक तेलका लागि, स्प्रे पम्पको साथ गिलासको बोतल, ग्यास पम्प बोतलहरू शैम्पूका लागि, पम्प डिस्पेंसरको साथ ग्लास बोतल,